ထင်ထားတာထက် ပိုသေးငယ်လာမယ့် Kia ရဲ့ နောက်ထပ် လျှပ်စစ်ကားသစ် ! – MyMedia Myanmar
ထင်ထားတာထက် ပိုသေးငယ်လာမယ့် Kia ရဲ့ နောက်ထပ် လျှပ်စစ်ကားသစ် !
Kia ကတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံးကားဈေးကွက်ထဲကို အချိန်မဆွဲပဲနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း ဝင်ရောက်လာနေ ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာပဲ Kia EV6 အသစ်ကို ထုတ်ပြတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အရောင်းဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ သေချာတာကတော့ တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ကားဈေးကွက်ကို ထင်ထားတာထက် လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကို ချဲ့ထွင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Auto Express က ရရှိထားတဲ့ သတင်းအရတော့ Kia ‌ရဲ့ နောက်ထပ် လျှပ်စစ်ကားအသစ် ၂ မျိုးထဲက တစ်စီးကတော့ EV4ဖြစ်မယ်လို့ သိထား ရပါတယ်။ EV6လိုပဲ အဆိုပါ ကားသစ်မှာလည်း Wheelbase နည်းနည်း တိုသွားမယ့် Hyundai Motor Group ရဲ့ E-GMP platform ပေါ်မှာပဲ တည်ဆောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ EV Architecture ကတော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ် ကားသစ်တစ်စီး အတွက် အတော်လေး အကျိုးဖြစ်စေမှာပါ။ EV4 ရဲ့ အရွယ်အစားကို Platform ပေါ် မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းကြည့်ရရင်တော့ Seltos ကား အရွယ်လောက် ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အတွင်းခန်းကတော့ ပိုကျယ်ကျယ် ဝန်းဝန်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Seltos ရဲ့ လျှပ်စစ်ကားအဖြစ် ထွက်ရှိလာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သေချာတာကတော့ EV6ရဲ့ ဘက်ထရီ နည်းပညာတွေကို အဆိုပါကားအသစ်ဆီ သေချာပေါက် ယူဆောင်လာမှာ ဖြစ်ကာ 58 kWh ဒါမှ မဟုတ် 77.4 kWh ဘက်ထရီကို တပ်ဆင်လာနိုင်ပါတယ်။ Dual-Motor Setup ကို ထည့်သွင်း တည်ဆောက်လာနိုင်ပြီး Entry Level ကားမှာတော့ ဈေးသက်သာမယ့် ရွေးချယ်စရာ တစ်ရပ်အနေနဲ့ မော်တာ တစ်လုံးလည်း ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးလာနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် အဓိက Platform တစ်ခု ကတော့ 800 Volt ထိ ရှိတဲ့ Electronic Architecture ကို ထည့်သွင်းပေးလာနိုင်ပြီး အားသွင်းနှုန်း က အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ 350 kW အထိ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ ပိုကြီးကြီး ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ အားသွင်းနှုန်းကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၈၀ ရာနှုန်း အထိ မိနစ် ၂၀ လောက် အထိပဲ အချိန်ယူရတော့မှာပါ။ ၆၂ မိုင် Range လောက်ကို တော့ ၅ မိနစ် ဝန်းကျင် လောက် နဲ့တင် အားသွင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးစရာရှိလာတာကတော့ အဆိုပါ EV4ကိုရော အမေရိက ဈေးကွက် ထဲမှာ ရောင်းချ လာပါ့မလား ဆိုတာပါပဲ။
အမေရိက ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ စဉ်းစားကြည့်ရင် အလွယ်တကူ ရောင်းချလာနိုင်ပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ အဆိုပါ Platform အတိုင်း နဂိုရှိ နေပြီးသားမို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပ ဈေးကွက်ထဲတော့ သေချာပေါက် ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး ယခင်တုန်း ကတည်းက အမေရိကမှာ ပိုကြီးတဲ့ ထိုင်ခုံ ၃ တန်းတန် EV SUV ရောက်ရှိလာမယ်လို့ ဆိုထားတာ ‌ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ EV7နဲ့ EV 8 တို့ထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မြင်ရဖို့ သိပ်မဝေး လောက်တော့ပါဘူး။ အမေရိကမှာ ဈေးကွက်ထဲ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ EV ၃ ခု လောက်အထိ ရောက်ရှိလာတာက များနေတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ ဈေးကွက်က အရမ်းကြီး ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မရှိသေးတာ မို့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိ အချိန် ကောင်းတစ်ခုကတော့ သမ္မတ ဘိုင်ဒန် အစိုးရ အနေနဲ့ ကလည်း လျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်ကို အရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ ရည်ရွယ် နေတာပါ။ အခုချိန်မှာ Kia အတွက် သေချာတာကတော့ EV4က မကြာခင်မှာပဲ ထွက်ပေါ်လာ‌တော့မှာ ဖြစ်ပြီး သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ ကတော့ လာမယ့် နှစ် ရဲ့တစ်ချိန်ချိန်လောက်မှာ 2023 Model အဖြစ် ရောက်ရှိလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် EV7နဲ့ EV 8 အသစ် တို့လည်း ၂၀၂၃ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဆက်လက် ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
The post ထင်ထားတာထက် ပိုသေးငယ်လာမယ့် Kia ရဲ့ နောက်ထပ် လျှပ်စစ်ကားသစ် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-24T13:01:28+06:30August 24th, 2021|MYCARS MYANMAR|